Ny lalao golf dimy tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Golf dia fanatanjahantena manana ny lazany nandritra ny taona maro. Ny fahatongavan'ireo mpilalao toa an'i Tiger Woods dia nandray anjara tamin'ny fiatraikany lehibe teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tany Espana, tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, noho ny mpilalao toa an'i Jon Rahm no nahazoany toerana bebe kokoa tamin'ny haino aman-jery. Vokatr'izany dia betsaka ny lalao sy rindranasa ho an'ny Android mifandraika amin'ity fanatanjahantena ity.
Noho izany, eto ambany izahay mamela anao ny lalao golf tsara indrindra izay hitantsika ankehitriny ho an'ny Android. Raha liana amin'ity fanatanjahantena ity ianao, dia mety hahaliana anao ireo lalao ireo. Vonona ny hihaona amin'izy ireo?
Ireo lalao rehetra asehonay anao ao anaty lisitra Azo alaina ao amin'ny Play Store izao. Ka ny fampidinana azy ireo amin'ny findainao dia tena tsotra. Ny fiasan'izy rehetra dia matetika mitovy, na dia samy manolotra zavatra hafa aza ny tsirairay. Izay mahaliana azy ireo.
3 Fifandonana Golf
5 Lalao Golf WGT
Ity lalao voalohany eo amin'ny lisitra ity dia mety toa ny sasany aminareo. Momba ny a lalao izay mifangaro golf amin'ny fampisehoana arcade somary mahazatraRaha ny marina dia tena mitovy amin'ny lalao an'ity fanatanjahantena ity izay hitantsika amin'ny milina arcade. Ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny mamely ny baolina amin'ny alàlan'ny famindrana ny rantsan-tànantsika eo amin'ny efijery. Amin'ity tranga ity dia tena zava-dehibe ny hafainganam-pandehantsika amin'ny baolina. Satria io no hamaritra ny heriny sy ny isa izay ho azontsika. Noho izany dia mila haingana be isika amin'ity tranga ity.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Freemium mahazatra izy io amin'io lafiny io. Saingy tsy voatery.
Developer: Feno tavy
Nifindra tany an'efitra izahay tamin'ny lalao faharoa tamin'ny lisitra. Hatramin'ity tranga ity manana ny tany foana foana isika ho toy ny lamosin'ny kapoka. Tsy dia mistery loatra ny fandidiana, mila mikapoka ny baolina hahatratra ny lavaka isika. Zavatra izay haverintsika im-betsaka mandritra izany, noho izany dia lalao somary tsotra amin'ity lafiny ity. Ny zava-mitranga dia ny mampiavaka azy ity ny mombamomba ity tontolo ity, ny kalitaon'ny sary ary ny hatsarana amin'ny ankapobeny. Safidy tsara ny hiarahana. Milamina sy mampiala voly izy io.
Ny fandefasana ity lalao ity amin'ny Android dia mitentina 1,59 euro. Na dia ho takalon'ny izany aza dia tsy misy mividy na dokam-barotra ao anatiny izahay.
Developer: Lalao kapiteny
Fahatelo hitantsika ny iray ny lalao malaza indrindra amin'ity karazana ity amin'ny Android. Safidy izay miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny voalohany amin'ny resaka fikapohana ny baolina. Na dia amin'ity tranga ity aza dia manana safidy maro isika, toy ny mifaninana amin'ny olon-kafa. Inona koa, fiovan'ny fotoana amin'ny lalao. Noho izany ianao dia mandeha iray miaraka amin'ny masoandro mankany amin'ny hafa miaraka amin'ny orana sy fahitana miharatsy kokoa, izay mahatonga ny fahasahiranana ho lehibe kokoa ary mavitrika kokoa hatrany ny lalao amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia manana sary tsara ihany koa.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Fa freemium mahazatra be io, noho izany dia manana fividianana ao anatiny isika. Ary matetika loatra izy ireo no mitady antsika hampiasa azy ireo.
Lalao io izay natao ho an'ny konsole indray mandeha, saingy niaraka tamin'ny fandehan'ny fotoana dia namindra ny findainy izy io. Ka afaka hitantsika ao amin'ny Play Store izy io. Azonao atao ny milaza fa lalao matihanina kokoa io, satria ny sary sy ny fifehezana dia ambony noho izay hitantsika amin'ny lohateny hafa amin'ity karazana ity. Ny fahasamihafana dia miavaka amin'ity fizarana ity. Ho fanampin'izany, manana asa maro hafa isika izay tsy hitantsika amin'ny lalao hafa, izay mahatonga azy io ho safidy feno. Ny gameplay azy dia tsara, tsy maintsy lazaina, ka tsy hanana olana ianao amin'ny fampiasana azy.
Ny fandefasana ity lalao ity amin'ny Android dia mitentina 2,99 euro. Ho an'ny maro dia toa somary lafo ihany izy io, na dia tsy misy ny fividianana na dokam-barotra ao anatiny aza. Ankoatr'izay dia lalao avo lenta izany. Ka mety mendrika izany.
Lalao Golf WGT
Izahay dia manidy ny lisitra amin'ny lalao matihanina iray hafa, feno kokoa sy mitovy amin'ny zavatra mety ho hitantsika amin'ny solosaina na consoles. Mijoro amin'ny fananana asa maro, toy ny taranja, lalao, fifaninanana… Ho fanampin'izay, mampiasa ny valizy tena izy ireo izy ireo, ary manana sary tsara sy fiatraikany tsara amin'ny hitsika. Azontsika atao ny mamaritra azy io ho safidy feno sy kalitao izay manakaiky kokoa ny atao hoe lalao golf matotra, miaraka amina endri-tsoratra hita maso kokoa. Raha mitady an'izany ianao dia azo antoka fa safidy tsara ity lalao ity.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia misy fividianana sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Lalao freemium tena mahazatra tokoa amin'io lafiny io.
Lalao WGT Golf avy amin'i Topgolf
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao golf tsara indrindra ho an'ny Android